Shiinaha 63MM / 2.5 Inch Herb Booqday 4 Dherer Zinc Alloy Grinder oo ay weheliso Soosaarka Soosaarka iyo Warshadaha | Hemgrinder
63MM / 2.5 Inch Herb Booqday 4 Jeexan Zinc Alloy Grinder oo leh Qanjirta
Gowska geedaha 4 xabbadood & 3 qol ayaa u oggolaanaya qodidda, keydinta, iyo shaandheynta manka. Astaamahaan loogu talagalay geedaha yaryar 4 naqshad naqshadeyn ah ayaa si fudud u kala-qaadsiisa, iyadoo la siinayo adeegsiga fudud iyo nadiifinta geedaha qumbaha.
Shayga No :: GSRP2603
Cabbir (Dhexroor x Dherer): 2.5 x 2.6 inji (63 x 66mm)
Miisaan koror: 252g
* Booqday geedku wuxuu ka kooban yahay 4 xabbadood & 3 qol ayaa u oggolaanaya qodidda, keydinta, iyo shaandheynta manka. Astaamahaan loogu talagalay geedaha yaryar 4 naqshad naqshadeyn ah ayaa si fudud u kala-qaadsiisa, iyadoo la siinayo adeegsiga fudud iyo nadiifinta geedaha qumbaha.
* Dusha sare waxay kuu oggolaaneysaa inaad u fiirsato geedi socodka mooshinka oo dhan, khaanadaha meesha laga saaray ayaa kuu oggolaanaya inaad ku dhaqaaqdo waxyaabaha la shiiday waqti kasta. Mesh Screen of grinder wuxuu sifeeyaa manka si aad u fiican, xoqista yar ee lagu daro waxay ka caawisaa ururinta budada.
* Waxay ku habboon tahay in lagu shikilo geedaha, dhir udgoon, shaah iwm
* Booqday xawaashkani wuxuu ka samaysan yahay bir macdanta adag oo waara. Ilkaha caday waxay ku siinayaan waayo-aragnimo xawaareyn dhakhso ah.
* Boorsada qaanso-roobaadka 2.5inch dhexroor ah, oo dhererkeedu yahay 2.6inch sare, awood ku filan iyo cabbir qumman, quruxsan iyo isafgarad leh. Midabka qaanso-roobaadka ee quruxda badan iyo moodada.
* 4 xabbadood & 3 qol ayaa u oggolaanaya qodidda, keydinta, iyo shaandheynta manka.
* Naqshad yar oo 4 ah ayaa si fudud u kala fasaareysa, iyadoo la siinayo adeegsiga fudud iyo nadiifinta geedaha qumbaha.
* Dusha sare waxay kuu oggolaaneysaa inaad u fiirsato geedi socodka mooshinka oo dhan, khaanadaha meesha laga saaray ayaa kuu oggolaanaya inaad ku dhaqaaqdo waxyaabaha la shiiday waqti kasta.
* Shaashadda Mesh ee miraha xarkaha waxay sifeyneysaa manka aad u wanaagsan, xoqista yar ee lagu daro waxay ka caawisaa ururinta budada.
* Daboolka magnetka awoodda badan wuxuu si weyn u caawiyaa yareynta qulqulka iyo xajinta haraga haraaga ka dhig mid cusub oo ur ah.
* Ilkaha caday waxay ku siinayaan waayo-aragnimo xawaareyn dhakhso ah.
60M / 2.4 Inch Magnetic Grinder Hexagon 4 Dhererka ...